एक चम्मच नुनले बनाउँछ सुन्दर अनुहार, यसरि प्रयोग गर्नुहोस्… « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
एक चम्मच नुनले बनाउँछ सुन्दर अनुहार, यसरि प्रयोग गर्नुहोस्…
Posted By OSNepal, California, USA || Date: 12 October, 2017
यो एउटा उपायबाट तपाईले क्लीन्जिङ, स्क्रबिङ र मस्चराइजिङको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । जसलाई त्वचाको कम्पलिट देखभाल मानिन्छ । कुनै सिसाको भाँडोमा एक चम्मच नुन राख्नुहोस । त्यसमा सोही मात्रामा मह सिसाएर दुई मिनेटका लागि पर्खनुहोस् ।
त्यसपछि अनुहारलाई सफा पानीले पाखाल्नुहोस् र अनुहारलाई सुक्न दिनुहोस् । त्यसपछि नुन र महको मिश्रण अनुहारमा लगानुहोस् । फेरि हातलाई सफा पानीमा हल्का भिजाउनुहोस् । भिजेको हातले अनुहारमा सर्कुलर मोशनमा विस्तारै स्क्रबिङ गर्नुहोस् । कम्तिमा ५ मिनेट स्क्रबिङ गरेर अनुहारलाई नर्मल पानीले धुनुहोस् ।
एक हप्तामा कम्तिमा दुईपटक यस्तो गर्नुहोस् । नुन एक एन्टी ब्याक्टेरियल प्राकृतिक क्लीन्जर हो । यसले गहिराइमा गएर त्वचाको सफाइ गर्छ । र ब्याक्टेरियाको नाश गर्छ । यस्तै मह प्राकृतिक मस्चराइजर हो । जसले त्वचालाई नरम बनाउनुका साथै त्वचामा निखार पनि ल्याउँछ ।
किन महिलालाई चिसो बढी लाग्छ ?
काठमाडौं : महिलालाई पुरुषलाई भन्दा बढी चिसो अनुभव हुने र..
नेपाली कम्पनीलाई औषधि उत्पादन गर्नै कठिनाइ
सिटिएल फार्मास्युटिकल प्रालिले गत वर्ष एक करोड ‘प्याकेट’ जीवनजल उत्पादनको..
सधाका लागि काठमाण्डौ सहर छाडेर गाउँतिर फर्किए चर्चित गायक पशुपति शर्मा र कोमल ओली (कारण सहित हेर्नुहोस)
सुनको मूल्य घट्यो की बढ्यो ? थाहा पाउनुहोस आजको मूल्य
पाँच वर्षको जेल सजायको फैसला भएपछि बङ्गलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री जियाका समर्थकद्वारा ढाकामा विरोध प्रदर्शन
बाबु-छोरीको कहालीलाग्दो सम्बन्ध परे बाबु जेल
मेरी बास्सैका चर्चित कलाकार घिराउले अहिले सम्मकै उत्कृष्ट कमेडी गीतमा यस्तो अबस्थामा देखिए (पेट मिची मिची हास्न हेर्नुहोस)